ဘယ်လောက်စားစားအားမရတဲ့ ဝက်သားဒုတ်ထိုးကို အိမ်မှာနေရင်းဗန်းလိုက်ကြီးမှာစားကြမယ် – FoodiesNavi
အဆီအသားအခေါက်စုံစုံညီညီလေးတွေနဲ့ ထူးကဲလှတဲ့အရသာတွေကြောင့် ? “အသားမှာဝက်”ဆိုတဲ့စကားပေါ်လာခဲ့ဟန်တူပါတယ်။ အပေါ်ယံအသားအဆီအခေါက်တွေတင်မကပါဘူး ။ ? အူပိတ် ၊ အူချို ၊ အရွတ် ၊ အသည်း ၊ အသွေး ၊ နှလုံး ၊ အချင်းတိုင် ၊ အမြီး ၊လျှာ ၊ လျှာဘေးသား ၊နားရွက် ၊ ခေါင်းသား ၊ မျက်လုံးတွေအထိ အရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်တာက ဝက်သားတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ ? ဝက်သားကိုချက်နည်းချက်ဟန်အမျိုးမျိုးနဲ့ ချက်ပြုတ်ပြင်နိုင်ပေမယ့် ဝက်တစ်ကိုယ်လုံးကအသားတွေကို တစ်ပြိုင်တည်းစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဝက်သားဒုတ်ထိုးစားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ အသားအစုံတွေကို ? ? အချဉ်ရည်လေးနဲ့တို့စားလိုက် ၊ ငရုတ်သီးစိမ်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးကိုက်လိုက်နဲ့ ရောပြွမ်းဝါးနေရင်း ဟင်းရည်လေးပါ တရွှတ်ရွှတ်သောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုတောင်ကောင်းလိုက်မလဲ တွေးနေရင်းတောင်တံတွေးမြိုချလိုက်ရတယ်(ဂလု ဂလု) ? ? ဒီလိုသွားစားချင်ပေမယ့် ဆိုင်မှာလည်းသွားမစားချင်ပြန်ဘူးဆိုရင်တော့ ဗီဇတူဝါသနာတူ အစားတစ်လိုင်းတွေကို လက်ကုတ်ပြီးသာ လူစုလိုက်ပါတော့နော်။
အက်မင်ပြောပြပေးမှာက (၃)သောင်းကျပ်နဲ့ ရှယ်ဝက်သားဒုတ်ထိုးအစုံကို ဗန်းကြီးနဲ့အပြည့် ၊ ကြာဇံကြော်ဗန်းကြီးအပြည့် ၊အချဉ်ရည် ၊ ဟင်းရည် ၊ သခွားသီး ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ဘဲဥ ၊ အာလူးတွေကိုလည်းအပိုဆောင်းရနိုင်မယ့်အကြောင်းလေးပါ။ ကိုယ့်ဘာသာလုပ်စားနေရင် အစပ်အဟပ်မတည့်မှာ အလုပ်ရှုပ်မှာနဲ့ လိုချင်တဲ့အသားမရမှာ စိုးရိမ်ရတာနဲ့တကယ်ကိုအာရုံနောက်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ရှယ်ကောင်းတဲ့ဗန်းကြီးတစ်ဗန်းကို ကြိုတင်ဖုန်းဆက်ဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီးငြိမ့်ငြိမ့်လေး ဇိမ်နဲ့အပီဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်တွေမှာသွားစားနေရင် (၅၀၀၀)ကျပ်ဆိုရင်တောင် ဗိုက်ထဲဘယ်လိုမှနေတာမဟုတ်ဘူးရယ် ? အကြိုက်တူဘော်ဒါ(၆)ယောက်လောက် စုပြီးမှာစားလိုက်ရင်လုံးဝရှယ်စားလို့ရပြီနော်။ ဗန်းကြီးရဲ့အနေအထားကတော့ အလျား(၁)ပေ ၊ အနံ(၈)လက်မဗန်းကြီးနဲ့ အပြည့်အမောက်ကြီးရမှာနော်။
အရသာကလည်းရှယ်ကောင်းသလို ဟင်းရည်လေးနဲ့အချဉ်ရည်ကလည်း လုံးဝလျှာနဲ့ကွက်တိပဲ ။ လုပ်ပေးတာစေတနာပါမှန်းသိပ်သိသာတယ်။ အရမ်းရှားတဲ့ အချင်းတိုင်တွေရနိုင်ပြီး ? အူတွေကိုအထပ်လေးတွေ ထပ်ပေးထားတော့ စားလို့ဝါးလို့ကို မဝနိုင်တော့ဘူး ။ အချင်းတိုင်မရနိုင်တဲ့နေ့ဆိုရင်လည်း ကြိုက်တဲ့အသားကိုပိုထည့်ပေးပါတယ်နော်။ အစားတစ်လိုင်းတို့ပိုကြိုက်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို မှာတဲ့အချိန်ကတည်းက ပြောပြပြီးမှာမယ်ဆိုရင်တော့ အကြိုက်တူနေတဲ့အသားတွေကို ဘော်ဒါတွေလုစားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ ? ? အချဉ်ရည်ကိုလည်း ငရုတ်ချဉ် ၊ မန်ကျည်းချဉ်ဆိုပြီး အစပ်အဟပ်ကအစ စိတ်ကြိုက်မှာယူလို့ရပြီနော် ။ မှာယူလို့ရနိုင်မယ့် ဖုန်းနံပါတ်လေးကတော့-
” 09795846316 “
Image Soure : www.facebook.com/Delicious Foods Places You Visited & Delivery Group
အသားဖယ်ပြီး ထမင်းပဲစားရင်တောင် အရသာကောင်းလွန်းလှတဲ့ ဒံပေါက်ထမင်းချက်နည်း